Biiftuubilisummaa | OROMIYAA
Posted on October 2, 2012	by biiftuubilisummaa
Posted on August 23, 2012	by biiftuubilisummaa
Jaarmiyaa Oromoo fi Ummata Oromoo Maraaf!
Jijjiiramni dorrobe kun bobaa diina biraa jala galuu hin qabu!
OO…. Jedhanii Waamicha bara dheeraatif Kaayyoo tokkoof Owwaachuun Amma!
Gufuu Bilisummaa Ummata Oromoo fi Walabummaa Oromiyaa ta’uun baroota 21f dhukkuba naqarsaa Ummata keenyaa kan ture Mataan Wayyaanee Mallas Zeenaawii haala hin eegamneen addunyaa tanarraa darbuun balballi bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaa banamuu ifaan nutti agarsiisa. Balbala saaqamte kana diinni biraa itti seenee abdii muul’atte tana akka nu harkatti hin dukkaneessine Jaarmiyaan Oromoo marti, garaagarummaa siyaasaa cinaatti dhiisudhaan, addatti immoo ABO fi ummanni Oromoo carraa kanatti fayyadamudhaan humna murteessaa iddoo murteessaa irratti bobbaasudhaan dirqama yeroon itti hin liqeeffatamne kana bahuun fardii ta’eera.
Kanaaf Jaarmiyaan Oromoo marti, akkasumas ummanni Oromoo bal’aan balbala saaqamte kana diina biraa irraa baraaruu fi gidiraa baroota dheeraaf ummata Oromoo irratti qancare kana hundeen buqqisanii gatuuf yeroo kamiiyyuu caalaa yeroon kun murteessaa ta’uu hubachudhaan Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaatiif Owwaachun amma jechuun waamicha qabsoo dhiyeessina!
Hagayya 21, 2012
Posted on July 24, 2012	by biiftuubilisummaa
KORA QINDEESSAA WARRAAQSA OROMO PEOPLE’S UPRISING UMMATA OROMOO (KQWUO) COORDINATING COUNCILE (OPUCC)
…Galanni keessan BILISUMMAA haa ta’u!!
Mootummaan Wayyaanee duula ummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo irratti gaggeessaa jirtu argaa-dhageettii addunyaa jalaa dhoksuuf dhakaan hin fonqolchin hin jiru. Dhaabbilee Bilisummaa saba isaanif falmaa jiranis maqaa shororkessummaa jedhu itti maxxansudhaan tumsaa fi dawoo biyyoota dhihaa dhabsiisuuf galaanni ishiin hin ce’in hin jiru. Gochaa itti milkaa’uu hanqatte kana abjuu “lammiiwwan biyya alaa jiran amansiifachuun deeggarsa arganna” jedhuun ergamtoota ishii karaa biyyoota adda addaatti erguu erga eegaltee bubbultee jirti. Ergamtoonni ishii kunniin ajandaa “…biyyatti deebi’atii invest godhaa…” jedhu of fuuldura qabuun, ajandaa dhoksaa immoo kan yeroo biyyatti deebi’an ittiin kiyyeessitu karaa miidiyaa biyyaa keessatin dabballonni maqaa gaazexessummaatin afaan-faajjessurratti bobba’anin akka simataman taasisti. Yeroo buufata xiyaara Boolee gahan jalqaba dursee kan isaan simatu maatii ykn firoottan osoo hin ta’in, “gaazexessitootaa’ fi qondaalota tikaa Wayyaaneeti. Kana booda egaa waan hin muul’annee fi waan hin argin argine jedhanii miidiyaaf ibsa kennuun dirqama ta’a. Ulee Wayyaanee ta’unis asumaa eegala. Haalli Kun namoota, keessayyuu Oromoota haala kanaan gowwoomaniis ta’ee fayidaa dhuunfatiif biddiiqanii biyyatti deebi’an irratti deddeebi’ee raawwateera. Shira mootummaa kana jalqabumarraa kan hubatan sabboontonni Oromoo biyyoota garaa garaa keessa jiran garuu jalqabumarraa gochaa Wayyaanee kana balaaleffachudhaan karaa adda addaa mormii dhageessisaa turaniiru.
Ergamtoota Wayyaanetis biyyoota deeman hundatti salphisaa turaniiru. Ummanni Oromoo dararama qarriffaa Wayyaanee jalaa baqachuun biyyoota adda addaa keessa jiran gama kanaan qabsoon gaggeessaa jiran QBO milkeessuu keessatti qooda olaanaa bahaa tureera. Fuula duraafis abdii hin guune ta’uu hojii mul’atadhaan agarsiisaa jiru. Salphinni hamaan tibba kana ergamtoota Wayyaanee Austria, magaala Melbourne keessatti qunnames itti fufiinsa diddaa gama kanaan itti jiramuuti. Diddaan hawaasni Oromoo biyya Australia Waxabajjii 30, 2012 gaggeesse kun kan ergamtoota Wayyaanee ajandaa qabatanii dhaqan illee osoo boorsaa/korojoo keessaa hin baafatin luullessee kan achii ari’e waan ta’eef, diddaawwan bifa walfakkaatan gaggeeffamaa turan keessa kan yeroo kamiiyyuu caalaa ummata Oromoo mara boonse, akkasumas kan haamilee fi tokkummaa qabaa’ota Oromoo haaromse hiriira mormii seena-qabeessa jechuun KQWUOn gammachuu itti dhagahame ibsachaa ummata Oromoo maraan baga gammaddan jedha.
KQWUOn diddaa boonsaa kana kan qindeessan qabsaa’ota Oromoo biyyaa Australia jiratan hunda galanni keessaan BILISUMMAA haa ta’u jechuun ijjannoo isaa ibsata.
Adoolessa 5, 2012
Lixa Arsii Ona Gadabaasaa Keessatti Mootummaan Wayyaanee Oromoota Hidhuu fi Jeessuun Dararaa Jira.
Posted on May 11, 2012	by biiftuubilisummaa
Zoonii Lixa Arsii, Ona Gadabasaasaa Keessaa namoota diddaa Hawaasni Musliimaa Mootummaa irratti kaaseen walqabatee gaafa Ebla 27,2012 tti hidhamanii yeroo ammaa kana Mana Murtii Ona Gadabasaasaatti beellamarra jiran.
Zoonii Lixa Arsii Ummata Oromoo Kanneen hidhamanii fi Jajjeefaman.pdf Ebala 2012
Diddaa Hawaasni Musliimaa Mootummaa Wayyaanee irratti Kaasaa jiru qaama qabsoo diddaa Waliigalaati!
Posted on May 5, 2012	by biiftuubilisummaa
Mootummaan Wayyaanee yeroo aangoo ishii tursiifachuuf jecha imaammata ijaarfama gita hawaasa biyyatti mara caasaa ishii jalatti ukkaamsuu fi too’achuuf hordoftu suuta suutaan hojiirraa oolchuu erga eegalte bubbultee jirti. Imaammata hamaa ijjarfama gita hawaasa kamiiyyuu caasaa ishii jalatti too’achuuf hordoftu kana hanguma diddaan uummataa itti cimaa deemuun tarkaanfii humnaatiin hojiirra oolchuuf yaalaa jirti. Wayyaaneen Waldaalee hawaasaa mara too’annoo fi hordoffii ishii jalatti akka ta’uuf “Seera” baastee hojiirra oolchuun ni yaadatama. To’annoo fi hordoffii ijaarfama gita hawaasaa irratti cimsaa jirtu keessaa inni tokko dhaabbilee Amantiiti! Shirri Wayyaanee kun kan isaan kiyyeesse dura-buutonni dhaabbilee Amantii biyyattii keessa jiranii hundi hawaasa tajaajilan cinaatti dhiisudhaan hojii-raawwachiiftota mootummaa Wayyaanee erga ta’aniiru. Haalli deemsa akkasii kun kan isaan yaaddesse Hawaasni Musliimaa biyyattii keessatti argaman diddaa cimaa mootummaa Wayyaanee irratti kaasaniiru. Diddaan Hawaasni Musliimaa gaggeessuu eegale kun shira mootummaan dhimma dhaabbilee/waldaalee hawaasaa keessa galuun jeeqaa jirtu hunda kan bakka bu’u waan ta’eef diddaan kun qaama qabsoo diddaa waliigalaa ummanni itti jiruuti!
1. Ummanni biyyattii, keessayyuu qabata diddaa eegalame kanaan tarkaanfiin gara-jabummaa addatti kan irratti fudhatamaa jiru, ummanni Oromoo diddaa hawaasa musliimaa kana gara QBOtti bal’isudhaan sochii kana akka tumsu waamicha goona!
2. Diddaan hawaasa Musliimaa kun kan eegale ji’oota sadi dura Finfinneetti yoo ta’u, Waraanni Wayyaanee sochii kana dhaamsuuf karaa maraan too’annoo cimsuu fi darbee darbee hidhuurra kan hafe nama tokkollee ifaan itti dhukaasee hin ajjeesne; diddaan kun babal’atee ummata Oromoo bira gaafa gahu garuu; waraanni Wayyaanee obsa horachuu hin dandeenye; guyyaa raasadhaan ummata nagaa rasaasaan harcaaste. Kanaaf immoo tarkaanfiin Godina Arsii, Ona Gadabasaasaatti fudhatte ragaa gahaadha. Kun egaa mootummaan wayyaanee hangam jibbaa fi sodaa guddaa ummata Oromoo irraa akka qabdu mirkaneessa. Kana waan ta’eef hawaasni Musliimaa ummata Oromoo hammeenya ilmaan Habashaa addatti ummata Oromoof qabdu kana hubachuudhaan diddaan eegalan qaama qabsoo Ummanni Oromoo marti itti jiruu ta’uu yaada keessa galchuudhaan, akkasumas bu’aan sochii kanaa qaama fedhii Ummata Oromoo dura dhaabbatuun akka hin butamne of-eeggannoo cimaa taasisudhaan sochii jalqaban kana gaaddisa QBO jalatti akka tikfatan dhaamsa dabarsina.
Caamsaa 4, 2012